mairie-antananarivo – Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo (SAMVA)
Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo (SAMVA)
auteur 30 may 2014 Commentaires fermés
ANDRAIKITRA SY ANJARA ASAN’NY SAMVA
Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanadiovana sy ny fanajariana (Assainissement) ny tanànan’Antananarivo ny SAMVA ka noho izany dia andraikiny ny mikojakoja ireo fitaovana sy fotodrafitr’asa mikasika ny fanadiovana.
Ireo anjara asan’ny SAMVA amin’ny fandraofana ny fako avy ao an-tokantrano dia :
- Fandraofana sy fitaterana ny fako ao anatin’ny dabam-pako miisa 380 mankeny Andralanitra izay milanja 1100 m3 isan’andro.
- Fitantanana ireo fiarabe fandraofana fako izay misy novidiana ary misy hofain’ny SAMVA
- Fitantanana ny tobim-pako eny Andralanitra izay manana velaran-tany mahery ny 14 ha.
Ankoatra ny fandroafana ny fako dia manana anjara andraikitra hafa koa ny SAMVA :
- Fitantanana, fikojakojana, fanajariana ireo fotodrafitr’asa sy ny fitaovana fanadiovana ny rano maloto ary ny ranon’orana; ny fanariana ny ampahan’ireo rano maloto eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay mirefy 47 km linéaire.
- Fitantanana ireo « Stations de pompage et de relevage » miisa dimy.
- Fanaraha-maso ireo toeram-pidiovana sy toeram-pivoahan’ny olon-tsotra ary ny fanalana sy ny fanariana ireo « Produits de vidange».
Ankehitriny ny SAMVA dia miara-miasa amin’ny CUA amin’ny fanatanterahana ireo asa fisorohana ny fahasimban’ireo fotodrafitr’asa ambanin’ny tany hivoahan’ny rano maloto sy ireo foto-drafitr’asa manangona ny rano orana. Ireo foto-drafitr’asa fanangonana ny ranon’ orana ireo dia mirefy manodidina ny 65 km ka mitentina 15 000 m3 ireo « Produits de curage » ho esorina.
Tsara ho fanatatra fa nanomboka tamin’ny taona 2012, ny SAMVA dia mikojakoja ireo « Collecteurs » eny anivon’ny boriborintany enina noho ny fangatahan’ny Filoham- pokontany, ny Lehiben’ny tsena ka ny tanjona dia ny mba hampihena ny voka-dratsy ny tondran-drano indrindra eny amin’ny ireo toerana iva.